RAVELOSON CONSTANT : NY TONDROZOTRA IHANY NY ANTSIKA – MyDago.com aime Madagascar
Ny fotoana tahaka izao hoy Raveloson Constant teny amin’ny Magro Behoririka androany dia tsy misy resaka misavoamboana fa ny tadiavintsika dia ny vaovao farany. Izao hoy izy no tokny hazava amintsika. Ny antony ny dinika dia tsy misy folo na zato fa tokana ihany, ahoana no ampiharana ny tondozotra ary ahoana no aneken-dRajoelina. Ny tondrozotra no resaka eto, hoy izy ary ahoana no mahatonga ny andininy faha 16 ho tanteraka, izay andininy faha 45 any aza miraharaha izany. Ny olana hoy Constant dia hoe ahoana no ahazoana tosika amin’izao tolona izao. Rajoelina dia mandrirarira ny fihaonana hatrany, na ireo mpiaradi aminy aza. Nysasany dia miseho ho mafana fo satria manamarina ny vola noraisiny. Ny Ankolafy Ravalomanana hoy izy dia tsy antoko ihany fa ny Filoha Ravalomanana no antsoina hiverina eto, ary ny tondrozotra no ataontsika eto. Tsy misy fotony ny hampodiana azy raha yaourt fotsiny fa ny filatsahany ho fidiana. Dikan’izany hoy Constant dia anisan’ny tsy maintsy hajaina ny olona tendrena ao amin’ny tondrozotra, ireo olona notendritendrena tatsy sy teroa. Tsy maintsy ampifandanjana hoy izy ny andrima-panjakana rehetra. Rehefa voahitsy ny tondrozotra dia tokony hiditra ny ankolafy Zafy sy Ratsiraka. Rajoelina hoy Constant dia tsy hanaiky amin’ny sitrapony fa indrindra ny namany dia mandrahona azy. Ny antska dia mazava fa ny tondrozotra ihany ary hampiharina amin’ny tokony ho izy ny andininy faha 16. Miverina eto ny Filoha Ravalomanana ary milatsaka hofidiana. Ahitsintsika amin’izay ny andrim-panjakana rehetra.
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 juillet 2012 Catégories Politique
5 réflexions sur « RAVELOSON CONSTANT : NY TONDROZOTRA IHANY NY ANTSIKA »
10 juillet 2012 à 20 h 00 min
Efa nifirany rehefa vita ny nilany azy e!!
Soa fa mbola misy olona mahay mijery eran’izao tontolo izao
ka mbola mahay MANDAHA fa tsy IZY IO DOMELINA io fa ny GASY ity no manindraindra azy mafy
fa tsy maintsy milatsaka ho FIDIANA indray izy fa tsy ampy anga ny efa filohan’i tetezatapaka io???????
O ray olona a!!ny tsy tompony indray no sarotiny an!!!mafy ity rehefa jamba sa VOAHOZONA DAHOLO e!!!
Io koa ny TIM Antananarivo fa mbola manamafy ity fihaonana sy ny filatsahany, raha izy no tė hilatsaka tsy
msy miraharaha an’izany fa anazy ny azy fa maninona raha tsy HINDRAINDRAINA lava toy izao e?????
MENDRIKA ve ity olona mba lelafina lava ity ???tsssssssss…….. ary aza misy mimenomenona fa ZAKAO!!
mety @ Gasy izao fanosihosena izao ooooooooooo
Famaizana io foza io Ranavalona ny fanomezana azy isan-jato 0.5 @ fifidianana avy eo ny tohiny ho hitantsika ny hanaovana azy ;fa tsimaintsy ho amboarintsika izy!! politika no hatao satria io foza io manana basy sy ny Frantsay ao am-badiny ka aleo angamba tsy dia raisina fanindraindrana le izy é!
Dia avelao izy hanao izay hataony any e!!izy tsy mbola nanao fanambarana
na dia in-1 mandeha aza ny momba an’i dada, nefa izy foana no asiana sira eto,
fa raha io koa no hilatsaka eo?? tsy maintsy HAMORITRA na tiana na tsy tiana dia iza no ho voa @’izay fa tsy
ny madinika sy ny any AMBANIVOLO rehetra any , tokony mba ho tsapan’ny rehetra izany, hilalao rà indray izy
miaro afo tsy ferana DEVOLY anie ireo e!!iza no ahasakana azy eo??na tsy maintsy voany aloha iianao.
Iza indray no HATAONY SORONA eo???enga anie ka ho diso ny heritreritro.
raiinibe dit :
11 juillet 2012 à 17 h 47 min
Ny hita aloha izao dia tsy mety hanaiky i Andry na dia ilain’ny Firenena aza izany. Mikatso ny raharaham-pirenena. Tsy zakan’i ANDRY ny demokrasia sady tsy hainy fa ny fifandrafesana no tiany ary ny mpiaro azy no tena fositra mamono ny Fandrosoana tsy isian’ny fitoniana sy ny tenierana eto.
Ho an’i Solo Razafy : Hamafisiko eto ny mba isian’ny vidéos e !!!
Ho anay aty amin’ny Faritra tena maro no tiana ho re ny teny fa tsy commentaire
Misaotra @ fanoanana @’ilay fitakiana Video ry Raiinibe!
Efa fantany fa tsy ho azy io toerana io dia SOPARANA fotsiny e!!
Fantany fa tsy aharitra ela eo izy fa efa izao tontolo izao mihintsy no MIAOKA azy dia io izy mandrovi-tsihy io.
Matokia fotsiny fa tsy maintsy HIJINJA izay NAFAFINY daholo na HO ELA NA HO HAINGANA, ny aina no matezà
samy ahita ny farany eto.Tsy hisy hiala menaka eo !!matokia ny ZANAHARY e!!
Précédent Article précédent : FIOMBONAM-BEN’NY MPIASAMPANJAKANA : HILAHATRA ENY AMIN’NY LALAN’NY FAHAFAHANA
Suivant Article suivant : NAIKA ELIANE : TSY MAINTSY MODY NY FILOHA RAVALOMANANA ARY MILATSAKA HO FIDIANA